izi — njem Lee - Official Site
Ka m na-enweta ihe ọ bụla ime eme, M mkpa n'echiche nke na m na-eme ihe magburu. "Ma ọ bụrụ na m na-a ahịhịa si, ga ahịhịa nwoke zọpụta?"M na a chebara ihe Ihọd, na m na-adịkarịghị adọta nkọwa ma ọ bụ tedious ihe aga-eme. O di nwute na, nkọwa na tedious aga-eme bụ na ọtụtụ ndị na ndụ n'ezie. Nke a bụ eleghị anya ihe mere m jisiri…
Ọ Dị Ihe O ọ bụrụ Jesus Rose?
Ọma anyị na ndị na oge nke afọ. Otu n'ime mmadụ abụọ ugboro ọtụtụ n'ime anyị gaa anyị na mama ụka, ma ọ bụ na-etinye on a mma Ista uwe na isi ka a dị nso ụlọ chọọchị. Maara m ụfọdụ nke y'all nwere gị Ista uwe na uwe ẹmende si.
O yiri ka onye ọ bụla na-akawanye, so na-eme ihe n'ememe. Krismas na Ista bụ ndị na-akpali ugboro nke afọ mgbe ọbụna ndị na-emekarị anaghị eche banyere Jesus na-etinye aka n'ụzọ ụfọdụ. E nwere Ista na àkwá na Ista swiiti maka ire ere n'ebe nile. E nwere Ista mmemme, na parades. Ista-ewe ihe karịrị a obere bit, ezie na ọtụtụ na-ekweghị na Ista akụkọ.
Ọ bụghị ihe ijuanya ezie n'ihi na Ista na Christmas aghọwo omenala ihe. Ha na na ghọọ obere ihe karịa mba ememe, ezinụlọ reunions, na ohere Jeriko ime ka ụfọdụ ndị ọzọ ego. N'ezie, ndị ahụ kwere na ihe omumu na onwu nke Kraịst usọrọ na, ma ọ bụghị na-achọrọ.
Echetara m na-eto eto na ezinụlọ m ga-aga niile maka Ista. Anyị ga-aga nnukwu ụlọ ahịa otu izu tupu ma na-picture na Ista ewi. M na ya onwe-eche na bụ creepiest niile ezumike mascots. A gigantic…
Na nso nso M na-agụ a biography nke Steve Jobs, onye nchoputa na ndị ọhụụ n'azụ Apple, nnukwu ụlọ ọrụ ndị dị n'ụwa. Ọ bụ n'ezie na-akpali iji na-agụ n'ihi na ọ bụ onye mmụta pụrụ iche…
Ònye ka m'bu? Part 1: Mara mma Ma Tiwara
Nke a izu ụka anyị na-aga ikwu okwu banyere njirimara. Nke ahụ bụ ihe gị isi gwara m ka m ekwu okwu banyere, ma ihe ha na-amaghị bụ na nke a bụ na ihe na-meela on obi m na ka m na e na-eche echiche banyere. M na-ekwu banyere ya na òtù ndị ntorobịa na chọọchị m na D.C. ezi a bit.
Oleekwanụ ihe mere njirimara anọwo na obi m? Gịnị mere m chere na ọ bụ otú ahụ dị mkpa ịma onye ị bụ? N'ihi na ọ bụrụ na ị na-amaghị onye ị bụ, ị na-amaghị otú ị na-kwesŽrŽ ebi.
Chee echiche banyere The Bourne Identity. Nwoke a kpọtere elu on a ụgbọ mmiri na-adịghị ma onye ọ bụ. Ọ na-achọpụta a aidia na-aga Switzerland. Ọ na-akawanye na a ọgụ ma ghota na ọ na-zụrụ azụ ọgụ. Agaghị na-enwe crazy ọ bụrụ na ị na-enweghị usoro chọpụtara na i nwere nzuzo ninja nkà? N'ihi na ike nke ihe nkiri, ọ bụ na a na njem na-achọpụta onye ọ bụ. Ọ bụ ike nke na ihe ọ mere, onye banyere. Ma ọ bụrụ na ọ maghị ya, ọ ga-enwe ike ibi ndụ dị ka…
M nnọọ na-ele nke a Jeazanaya Ọma ahụ ajụjụ ọnụ ụnyaahụ. Ọ na-ekwu banyere ahụmahụ o na chọọchị dị iche iche. Na ahụmahụ ya ụka mgbe nile, sị abịa dị ka ị…
Mpako Speech na Ebube Chineke
M hụrụ n'anya na na. Otu n'ime ihe mere m n'anya ụmụaka bụ n'ihi na ha na-egosi anyị onwe anyị. Ha na-na dị ka obere enyo. Ka m kọọrọ gị ihe m pụtara. Kids nwere mara mma nke ukwuu niile n'ime nsogbu ndị anyị nwere, ma nsogbu ndị ahụ bụ ndị dị nnọọ a otutu ihe doro anya n'ihi na ha amaghị otú e si zobe ha ma. Nke a bụ n'ezie doo anya mgbe ụmụaka-eme ihe ha na-agaghị kwesŽrŽ ime.
Ị hụtụwo a nwa ewu aka ihe ha na-agaghị kwesŽrŽ emetụ? Ha ga-ele anya gburugburu ka ọ mara ma ị na-achọ. Ha achọghị ịma ma ọ bụrụ na onye ọzọ eyen na-achọ; ha dị nnọọ achọghị okenye ma ọ bụ nne na nna na-ahụ. Gịnị mere ha ji na, ezie na? N'ihi na ha maara na ị na-isi, na ha achọghị ka ị na-achọpụta n'ihi na ha maara na ị na-ka onye ha ga-aza na-.
Ndị okenye bụ otu ụzọ. Ọtụtụ mgbe, anyị na-na na OK na-eme ihe anyị na-adịghị kwesŽrŽ ime, ka anya dị ka onye anyị na-aza na-adịghị chọpụta. Ị obi ụtọ na adị ruo mgbe ị na-ahụ cops n'ihu. Ma eleghị anya, anyị na-enwe obi ụtọ na-ahapụ ọrụ n'oge dị ka ogologo dị ka anyị onyeisi adịghị chọpụta. Ma eleghị anya, ụfọdụ n'ime anyị na-aghọ aghụghọ n'ule dị ka ogologo dị ka prọfesọ adịghị erukwa…
Na ihe ọ bụla na e nwere ihe a ọtụtụ nke na-amalite na-undervalued. The uru nke ihe dị na-agbanwe dabere na ole e nwere. Mgbe e nwere 100 kuki na a table mgbe ọrụ i nwere ike na-ekwu okwu n'ihi na a mgbe. Ma mgbe e nwere nanị ole na ole kuki, o yiri ka ha dị oké ọnụ ahịa. Eleghị anya ị ga ọsọ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-otu na oge, na…
M na-eme music n'ihi na a dị ndụ. Na dị ka ọtụtụ n'ime ị na-mara, ụdị egwú ndị m na-eme bụ obere bit dị iche iche karịa songs i nwere ike ịnụ na a CHBC ọrụ. E nwere ọtụtụ ihe banyere Hip iwuli elu na ime ka ọ dị iche iche karịa ndị ọzọ Genres nke music. Otu ihe na ihe bụghị nanị Hip iwuli elu, ma a na-ahụkarị bụ remix.
Gịnị na-emekarị itịbe na a remix bụ na ị na-a song ị na-ama mere na ị remix ya. Ị na-ụfọdụ ọcha si mbụ, ma ị nwekwara ike ịgbanwe ihe ụfọdụ ka a ọhụrụ atụ ogho na ya. N'ihi ya, i nwere ike tinye ọhụrụ lyrics, ma ọ bụ a dum ọhụrụ kwaa, ma ọ bụ a dị nnọọ a dị iche iche obibia nke otu ihe. Ma, otu n'ime ihe mgbaru ọsọ bụ iji nye ndị na-ege ntị ihe ọhụrụ na ọbụna mma na song.
Ọma na ogbugba ndu ohu, nke anyị text okwu banyere n'abalị, bụ fọrọ nke nta ka a remix. M na-ekwu na n'ihi na Chineke kwere nkwa ime ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ ndị Ya ihe, ma ihe nile banyere ya abụghị ihe ọhụrụ. Uma ya agbanwebeghị, Nkwa ya agbanweghị, Ya bịa ná nzube agbanweghị. Ma e nwere ihe ụfọdụ banyere ọgbụgba ndụ a na…
Ị na-adịghị na-atụgharị m. na Exodus 17, ndị Israel nwalee Chineke site n'ime ka ọ bụrụ na ha nwere ike ghara ịtụkwasị Ya obi. Mgbe ihe niile O merela nye ha, -eme ka ha ndị Ya, anapụta ha n'ohu, eme ndokwa maka ha na na, ha ka na-adịghị atụkwasị obi na Ya. Ya mere, ha ibuso…
E nwere ihe ole na ole na nwuo mmetụta ahụ n'obi m maka Jesus dị ka anụ Kraịst ọhụrụ - ma ọ bụ ihe ọ bụla Kraịst - eme ka ọha Ọrụ nke okwukwe ha site na baptism. Echere m na nke ụfọdụ ndị enyi m, ezie na, bụ ndị na ohuru Kraịst na ndị a obere mgbagwoju anya banyere ihe nke ahụ pụtara. Ha na-anụ Ozi Ọma na they've e mere ọhụrụ e kere eke, na ha nwere ọhụrụ obi, na ha na e saa na n'onye ezi omume. Na ha na-eche na nke a pụtara na ha agakwaghị ọgụ na mgba ma ọ bụ ihu ọnwụnwa. Ma onye ọ bụla who's kemgbe a Christian otu izu nwere ike ịgwa gị that's abụghị eziokwu. Ajụjụ bụ ma ànyị ga-ọnwụnwa bịaara. Ajụjụ bụ, olee otú anyị si emeghachi omume ọnwụnwa?
M na-agụ a see okwu n'izu a na kwuru, "Mmadụ niile na-nwaa. E nweghị onye na-adịgide ndụ a na-apụghị agbajikwa ala, nyere na ọ bụ nri ọnwụnwa, -etinye na nri ntụpọ. "Nke a bụ eziokwu na nkwupụta? Ka e mgbe a mmadụ na-ike iguzogide ọbụna ihe ndị kasị mma enịm ọnwụnwa? Ọfọn, let's echigharịkwuru Luke 4:1-2:
Jesus, juputara na Mọ Nsọ, si Jọdan na e mere site na Mọ Nsọ na…
Ị nwekwara ike ikwu banyere artists dị ka Lil Wayne. E nwere ụfọdụ rappers bụ ndị dị nnọọ chọrọ ịbụ ma ama na-eme ka ego. Ọ bụghị Lil Wayne. Ọ chọrọ ịbụ onye kasị ukwuu nke…